Shimbiro ku soo daatay Falköping | Somaliska
Shimbiro badan ayaa cirka ka soo dhacay ayagoo mayd ah magaalada Falköping. Shimbirahaan oo gaaraya 50-100 xabo ayaan la aqoon waxa ka dhacay ayadoo labadii maalmood ee la soo dhaafay arimo nuucaan ah laga soo sheegay dalka Maraykanka. Gobolka Arkansas ee maraykanka ayaa waxaa ku soo daatay 4,000 - 5000 00 shimbirood halka gobolka Louisiana laga soo sheegay ilaa 500 oo shimbirood oo ayaguna ku soo daatay sidoo kale gobolo kale ayaa laga sheegay arimo nuucaas ah. Goobta ay shimbiraha ku soo daateen ee magaalada Falköping ayaa la xiray ayadoo ay qubarada caafimaadka baaritaan ku sameynayaa waxa ku dhacay shimbirahaas. Hadalo kala duwan ayaa la isla dhexmarayay maraykanka isbuucaan ayadoo dadka khaar ay leeyihiin waxaa shimbiraha soo riday alaabada loo yaqaan "Fireworks" ee ay dadku ku soo dhaweynayeen sanadka cusub halka dadkalena ay leeyihiin waxaa macquul ah in ay cimilada tahay. Si kastaba ha ahaatee dadka ayaa ku fajacsan waxa dhaliyay arintaan.
Shimbiro badan ayaa cirka ka soo dhacay ayagoo mayd ah magaalada Falköping. Shimbirahaan oo gaaraya 50-100 xabo ayaan la aqoon waxa ka dhacay ayadoo labadii maalmood ee la soo dhaafay arimo nuucaan ah laga soo sheegay dalka Maraykanka.
Gobolka Arkansas ee maraykanka ayaa waxaa ku soo daatay 4,000 – 5000 00 shimbirood halka gobolka Louisiana laga soo sheegay ilaa 500 oo shimbirood oo ayaguna ku soo daatay sidoo kale gobolo kale ayaa laga sheegay arimo nuucaas ah.
Goobta ay shimbiraha ku soo daateen ee magaalada Falköping ayaa la xiray ayadoo ay qubarada caafimaadka baaritaan ku sameynayaa waxa ku dhacay shimbirahaas.
Hadalo kala duwan ayaa la isla dhexmarayay maraykanka isbuucaan ayadoo dadka khaar ay leeyihiin waxaa shimbiraha soo riday alaabada loo yaqaan “Fireworks” ee ay dadku ku soo dhaweynayeen sanadka cusub halka dadkalena ay leeyihiin waxaa macquul ah in ay cimilada tahay. Si kastaba ha ahaatee dadka ayaa ku fajacsan waxa dhaliyay arintaan.